Uthi yize uvalo ovule indawo yokudla | IOL Isolezwe
Uthi yize uvalo ovule indawo yokudla
Isolezwe / 31 May 2012, 08:59am /
UPhumzile Mbambo umphathi we Stages Restaurant and Lounge ese Port Shepstone.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
KUFANELE abantu bakwazi ukubona idayimane noma lingcoliswe wudaka, lokhu kubonakaliswe wumsebenzi wowesifazane ophendule indawo ebidelelekile wayenza yaba ngenye yezindawo eziphambili zokudla.
Le ndawo ebizwa ngeStages, esePort Shepstone edlise ngobuhle njengoba iyibhilidi lengilazi endaweni egudle ulwandle, isingenye yezindawo zokudla ezihamba phambili.
Yize seyisematheni kwabaningi, eminyakeni embalwa edlule leli bhilidi lengilazi lalingcolile, lingatshengisi nokuthi kukhona okuhle okungaqhamuka kulo.
UNkk Phumzile Mbambo akabambelelanga ekungcoleni kwalo kepha yena nomyeni wakhe uMnuz Mthoko Mbambo, babona ukuthi bangakwazi ukuyithuthukisa le ndawo.
“Ngiqala ukubona leli bhilidi ngavele ngalithanda, ngabona igugu elidinga ukusetshenzwa. Lalikade libonwe ngumyeni wami kuqala wangitshela ngalo ngathi sengizibonela ngaqonda ukuthi kungani ebengawuvali umlomo ngalo,” kusho uNkk Mbambo.
Manje le ndawo yokudla iyindawo yokuqala abantu abacabanga ukukhiphela abangani babo kuyo noma benze indumezulu yemicimbi baphinde babambele khona imihlangano ngamabhizinisi.
UNkk Mbambo ubenguthisha iminyaka eminingi kodwa lokhu ukuyekile wase enza izifundo zamabhizinisi.
“Yize bengimatasa ngenxa yezifundo zami, ngibone kungcono ukuthi ngiphinde ngenze izifundo zokupheka, ngase ngiqala inkampani encane yokupheka. Lokhu kungisize kakhulu ngoba manje ngikwazi ukusebenzisa konke engikufundile ukuze ngikwazi ukuphumelela kule nkampani,” kusho uNkk Mbambo.
IStages imumatha abantu abangaphezu kuka-250 futhi seyike yasingatha imicimbi emikhulu.
Ngaphandle komsebenzi omkhulu ohambisana nempumelelo yale ndawo, yena nomyeni wakhe bakhiphe izimali ezinkulu belungisa le ndawo ukuthi ifinyelele kuleli zinga ekulo.
UNkk Mbambo uthe kubabize imali efika ku-R2.3 million ukulungisa le ndawo eqale ukusebenza kulo nyaka.
Uthe ukube babuka umsebenzi owawubamele babengeke baphumelelele.
“Abantu abaningi bavinjwa ngukusaba ekutheni baphumelele kulokho abakufisayo. Ngiyacabanga ukuthi baningi abake bayibona leya ndawo babona ukuthi isesimweni esihle sokuthi ingakwazi ukwenziwa indawo engadonsa amehlo abantu iphinde yakhe namathuba omsebenzi,” kuchaza uNkk Mbambo.
Uthe noma ayefisa ukungena kwezamabhizini-si wayengazitsheli ukuthi angavula indawo yokudla ekuleli zinga.